I-IPL yokususa izinwele i-Suppliers ne-Factory | China IPL hair ukususwa laser Manufacturers
Lo mshini we-IPL uyimodeli ethandwa kakhulu, isikrini siyi-8 inches real screen touch screen, amandla ayi-1200w, impilo yesibani ingaphezu kwezibhamu ezingama-300 000. Inezihlungi ezi-3 ngomshini, ungakhetha ezinye izihlungi uma udinga.
ipl laser mpo izinwele ukususwa umshini salon
Lo mshini wokususa izinwele oyisibonelo ngumshini wokususa izinwele we-ipl, singenza ngokwezifiso umbala wegobolondo, isibambo, ungakhetha isibambo se-ipl kuphela, noma isibambo se-ipl, noma ipl rf q switched nd yag three handle. Welcome to send inquiry to thina.
ipl nd yag laser 2 in1 umshini
Le yimodeli yokuthengisa eshisayo yedeskstop 2 ku-1 ipl laser hair hair machine for beauty salon, kungaba kokubili ukususwa kwezinwele nokususwa kwe-tattoo, ngekhwalithi ephezulu nentengo engcono kakhulu, sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
ipl shr umshini wokususa izinwele
Lo mshini we-ipl laser hair ukususwa umshini yi-multifunction, uhlanganisa ubuchwepheshe be-ipl, rf kanye ne-q switched nd yag laser, esebenza ngempumeleloizinwele ukususwa, ukususwa kwemibimbi, ukususwa kwetatoo.we desigh lo mshini onezingxenye ezisezingeni eliphakeme.
Amatebhe 3 ku-1 ipl laser ukususwa kwezinwele
Lo ngumshini osebenza ngamakhompiyutha 3 kumshini wokususa izinwele ongu-1, onezibambo ezintathu, isibambo se-ipl ikakhulukazi ukususwa kwezinwele, isibambo se-rf ukususa imibimbi, isibambo esishintshiwe nd yag laser esenzelwe ukususwa kwe-tattoo, ukukhishwa kwekhabhoni.
Umshini wokususa izinwele we-IPL uyimodeli yakudala, kulula ukuyiphatha, futhi umphumela uphelele, singasekela isihlungi esihlukile, i-480nm, i-590nm, i-640nm, i-690nm, i-750nm ne-430nm, ungasusa izinwele, ususe imithambo, amabala, futhi ukuphakamisa isikhumba noma ukuvuselelwa kwesikhumba.Udinga nje ukushintsha isihlungi ukuze uthole le misebenzi ehlukile.
ipl rf ideskithophu yokususa izinwele umshini
Lo ngumshini wedeskstop model ipl shr hair wokususa, nawo onesibambo se-rf sokuvuselela isikhumba, kulula ukusebenza, umkhiqizo usezingeni eliphakeme futhi isiqinisekiso unyaka owodwa wewaranti.
Umshini wokususa izinwele o-3 ku-1 SHR IPL RF
Umshini wokusebenza we-3 koku-1 wenziwe ngokukhethekile, uyathandwa kakhulu kuma-salon wobuhle, izibambo ezintathu zemisebenzi ehlukile, isibambo se-IPL, iza nobuchwepheshe be-SHR, Susa izinwele ngokushesha futhi ukhuthaze isimo sesikhumba, futhi i-ND YAG laser ingeyesibambo sokususa i-tattoo, ngamathiphu amathathu, i-1064nm / 532nm. idoli elimnyama, okwamanje i-RF isibambo singaphakamisa isikhumba futhi sisuse imibimbi.